C/casiis Lafta Gareen oo ku tilmaamay Ciidanka Xoogga dalka qeybta 60aad inay yihiin kuwo ugu liito | Baydhabo Online
Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ku eedeeyay Ciidanka xoogga dalka ee ka tirsan qeybta 60aad ee fadhigooda yahay magaalada Baydhabo inay yihiin kuwo ugu liito.
Waxaa uu sheegay in askarta iyo saraakiisha ka tirsan qeybtaas ay yihiin kuwo qabyaalad ku shaqeynaya, isla markaana dhibaatada ay ku hayaan shacabka uu sii batay.
“Askarta ciidanka qeybta 60aad iyo saraakiishooda waa ciidanka ugu liito, inuu dad wax taro iska dhaafee dhibaatada ay sameynayaan iyo wax tarkooda 80% dhibaatada ay sameynayaan ayaa badan”ayuu yiri C/casiis Lafta Gareen.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Askari iyo Sarkaal ku mashquulsan dhul aysan aheyn ciidan noqon karin, waxaana uu ku eedeeyay in ciidamadaas ay jidka u taagan yihiin shacabka oo ay dil u geysanayaan.
Ciidamada xoogga dalka ee ka tirsan qeybta 60aad ayaa dhowaan ku lug yeeshay dilal ka dhacay gudaha iyo duleedka magaalada Baydhabo, waxaana dilalkaas ay salka ku hayeen aanooyin qabiil ka dhashay muran dhuleed.